ပုံလေးတွေထည့်ကြမယ်... - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ဒါကကိုကကြီးမေးထားတဲ့ ဖိုရမ်မှာပို့စ်တွေတင်တဲ့အခါ ပုံတွေထည့်ပုံထည့်နည်းပါ။ တခြားမသိသေးတဲ့ မိသားစုဝင်တွေလည်း သိသင့်တယ်ထင်တဲ့အတွက် ဒီနေရာမှာပဲရေးလိုက်ပါ့မယ်။
ဖိုရမ်မှာပို့စ်တွေတင်တဲ့အခါ ပုံတွေထည့်ချင်ရင်(စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုတင်ပေးရင်း စာအုပ်အဖုံးလေးပြချင်တာမျိုး) ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ပုံကို Online Image Hosting ဆိုက်တစ်ခုခုမှာ အရင်တင်ထားဖို့လိုပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်သုံးနိုင်တဲ့ http://imageshack.us/ နဲ့ http://tinypic.com/ နှစ်ခုကိုအသုံးများပါတယ်။ နမူနာတစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။
ကျနော်တို့ပို့စ်တစ်ခုတင်ဖို့ စာရေးတဲ့ Editor ထဲမှာရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။ http://imageshack.us/ ကိုဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်ညာဘက်မှာ Browse ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ File Upload box ထဲမှာ ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ ပုံကိုလိုက်ရှာပြီး Open ကိုနှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ပုံကသိပ်ကြီးနေရင် ပုံကိုချုံ့တာတွေဘာတွေ တစ်ခါတည်းရွေးခဲ့လို့ရပါတယ်။ အဆင်သင့်ဖြစ်ရင်အောက်က host it ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။
ခဏစောင့်ပြီးရင် ပုံကို Upload တင်ပြီးလို့ရလာတဲ့လင့်ခ်တွေကို ပေးထားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီပေးထားတဲ့လင့်ခ်တွေအများကြီးထဲကမှ ဖိုရမ်တွေမှာသုံးဖို့ဆိုရင် Direct link (or) hot link ဆိုတာကိုသုံးရပါမယ်။ လင့်ခ်ပေ့ခ်ျရဲ့အောက်ဘက်ဆုံးလောက်မှာ Direct link to image ဆိုတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီဘေးက.. လင့်ခ်ကိုကူးထားပါ။
ပြီးရင်ရေးလက်စပို့စ်ဆီကိုပြန်လာပါ။ ပုံထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ cursor ချပြီး Editor Toolbar ပေါ်က တောင်တန်းပုံ icon လေးကိုနှိပ်ပါ။ လင့်ခ်တောင်းတဲ့ box လေးကျလာပါမယ်။ ခုနကကူးလာတဲ့လင့်ခ်ကို အဲဒီမှာထည့်ပြီး OK ပြောပါ။ ဒါဆိုရင်ကျနော်တို့ရဲ့ ပုံလင့်ခ်ကို ['IMG][/IMG] tag နှစ်ခုကြားမှာဖြည့်ထားတာ တွေ့ရပါမယ်။ (နောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်လာရင် Insert Image icon ကိုမနှိပ်တော့ဘဲ အဲဒီ tag နှစ်ခုကြားမှာ လင့်ခ်ကို manually ဖြည့်ရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်။)
ပြီးရင်ကျနော်တို့ရဲ့ တင်ချင်တဲ့ပို့စ်ကို နမူနာအရင်ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ ပုံတွေကပေါ်ရဲ့လား၊ နေရာကျရဲ့လား.. စသဖြင့်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး အိုကေပြီဆိုရင် â€œဆွေးနွေးချက်ကိုတင်မည်â€� ခလုတ်ကိုသာ နှိပ်လိုက်ပါတော့ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 128 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ကိုဖြိုးလေး, ကွက်တိ, ခင်မေခ, ခိုင်နွေ, ချယ်ရီမင်း, ခွန်ညီး, ဆန်းမောင်, ဇာနည်စိုး, ဇွဲသူရိန်, တက်တူး, တီဘွား, ထွန်းဝင်းနိုင်, နန်းရွှေဝါ, နီထွန်းဦး, ပခက, ပုထုဇဉ်, ဖိုးထိန်, ဖယောင်း, မင်းအာကာကျော်, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းကျော်ဦး, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သက်ပိုင်, သက်အောင်နိုင်, သင်းသင်းဟန်, ဟန်မိုးလွင်, ဟိန်းသူအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးဦးဗျားဗျား, ဦးလေးကြီး, ကောင်းထက်ဝေ, ကောင်းရြဲ့ဖူလေး, ကောင်းပြည့်, ကျော်ထက်ချိန်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇေယျာအေး, နေမင်းသွေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်ကီး, မောင်မဲညို, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, သောကမဲ့မိုးတိမ်, အောင်ဗလ, အောင်မင်းကို, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, ကြယ်စင်စိုး, နှင်း, နှင်းမာန်, abcstudent, amaung344, Annku, arkaraung, Aung Aung, aungphyo, AZM, azp09, blackNwhite, bonge, cherry, chitnyimalay, dusk, frogfish, g00gle, gogogyi, goldstar, hanni, hta, kaung kin lu, khaing king, kktth, ko lin, ko myo, koaungkyaw7, kokomyomin, kyarminthar, Kyaw Nay Soe, kyawmyowin, LaMike, layatecho, lionpep007, lu soe, Lwin Thu, mingalarmin, minlatt, minthike, minthumon, minwain, mjkomg012@gmail.com, mmshwemoelay, moe gyi, moe san dar, moemama2008, moemoehtike, Musa, myatnoe, Myo Min Zaw, naychiyoon, new-comer^girl, ngebite, nyi nge, nyinyi mt, pannuko, phoetharlay, PoeHapGyi, pyaephyolin615, sAnDViper, smlat88, Starfire, tawwinthissa2010, thamadi, thetzin, tu tu, unique, waterpeople, winkyway, Ya Min Thu, yelinoo, zin min aung, zinkomin, zinnaing, zo
Originally Posted by မျိုးမင်း
ရပါတယ်ကိုမျိုးမင်းရေ...။ သူက အပေါ်နှစ်ခုထက်ပိုလေးတဲ့အပြင် မမ်ဘာလဲမဖြစ်မနေ၀င်ရတာမို့ ကျနော်ထည့်မပြောတော့တာပါ။ ဖိုရမ်မှာပုံတွေထည့်ဖို့အတွက် ဘယ် image hosting site ကရှယ်ထားတဲ့ပုံကိုမဆို ထည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သုံးရမယ့်လင့်ခ်ကတော့ Direct Link(Hot Link) (သို့မဟုတ်) Thumbnail Link တွေပဲရပါမယ်။ Direct Link ဆိုရင် ဖိုရမ်က Insert Image ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ [.IMG][/IMG] နှစ်ခုကြားမှာ manually ထည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ အဲဒီအခါကျရင် ပုံကိုကျနော်တို့ host လုပ်ခဲ့တဲ့အရွယ်အစားအတိုင်း ဖိုရမ်မှာပေါ်မှာဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ဖိုရမ်မှာတော့ သတ်မှတ်အရွယ်အစား(400x300 pixel)ထက်ကြီးရင် ပုံကိုချုံ့ပြီးပြပါလိမ့်မယ်။
Thumbnail Link တွေကတော့ ဖိုရမ်မှာထည့်ရင် [.IMG][/IMG] tag မပါရပါဘူး။ Insert Image မလုပ်ရဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့လင့်ခ်ကိုကူးလာပြီး ဒီအတိုင်းကိုယ့်ပို့စ်မှာ Paste လုပ်ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့်.. သူကနဂိုအရွယ်အစားအတိုင်း မပေါ်ဘူးဗျ။ Thumbnail ဖြစ်တဲ့အတွက် ခပ်သေးသေးပဲပေါ်မှာပါ။ (အဲဒီလိုသေးနေတာကတော့ ကျနော်တို့ဖိုရမ်ရဲ့စနစ်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ Function အရပါ။) အဲဒီပုံအသေးလေးအပေါ် ကလစ်လုပ်လိုက်မှ နောက်ဝင်းဒိုးစ်တစ်ခုမှာ သွားပေါ်မှာပါ။ တကယ်လို့ Thumbnail လင့်ခ်ကို Insert Image လုပ်ခဲ့ရင် တကယ်ပေါ်တဲ့အခါ [.IMG][/IMG] နှစ်ခုအဆစ်ပါနေပါလိမ့်မယ်။ (ခု.. ဖိုရမ်ရဲ့တစ်ချို့ပို့စ်တွေမှာ အဲလိုမျိုးတွေတွေ့နေရလို့ တစ်ခါတည်းပြောထားတာပါ)
Photobucket ကတော့ ပိုတောင်ကောင်းပါသေးတယ်။ သူ့ဆီမှာ image host လုပ်ပြီးရင် လင့်ခ်လေးမျိုးပေးပါတယ်။ အဲဒီထဲက direct link နဲ့ image code နှစ်မျိုးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Image Code က ဒါရိုက်လင့်ခ်ကို IMG tag တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားတာပါ။ (အဲဒီတော့ အဲဒီလင့်ခ်ကိုသုံးရင် ဖိုရမ်မှာ Insert Image ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာ။)
အောက်ပါအသင်းဝင် 43 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ကိုဖြိုးလေး, ကွက်တိ, ချယ်ရီမင်း, ဆွိ, တက်တူး, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အိမ့်ဖြူ, ဦးဦးဗျားဗျား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇေယျာအေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, ကြယ်စင်စိုး, Aung Aung, aungphyo, AZM, azp09, blackNwhite, HTUT KHAUNG, kaung kin lu, ko lin, kyarminthar, Kyaw Nay Soe, kyawmyowin, Lwin Thu, minthumon, mjkomg012@gmail.com, mmshwemoelay, moe san dar, Musa, myatnoe, smlat88, thamadi, thetzin, tu tu, zo
ပို့စ် 28 ခုအတွက် 90 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ပုံလေးတွေထည့်ကြမယ်...
ကျွန်တော်ပုံ စမ်းထည့် ကြည့် တာ ပုံမပေါ်ပဲ ကြက်ခြေခတ်အမှတ်ပဲပေါ်တယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ winntun အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, phyulayswe07, thetzin, zo
Find More Posts by winntun
ကျနော်ပြင်ပေးသွားပါပြီ။ ကိုဝင်ထွန်းလိုအပ်တာလေးတွေက ကိုဝင်ထွန်းရလာတဲ့ လင့်ိကို ဒါရိုက်မတင်ပဲ အောက်ကပြထားတဲ့ နည်းလေးကိုလိုက်လိုက်ပါ ကိုပိုင်အပေၞမှာ ပြထားတာပါ။ အဆင်ပြေပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 31 ဦးတို့မှ ဂျစ်တူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ကွက်တိ, တက်တူး, နီထွန်းဦး, ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, သူသူလေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးဦးဗျားဗျား, ကောင်းထက်ဝေ, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, နှင်း, arkaraung, aungphyo, blackNwhite, g00gle, kaung kin lu, koaungkyaw7, kyarminthar, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thamadi, yelinoo, zo
Originally Posted by winntun
အားတော့နာပါတယ်။ကျွန်တော်လဲ လမ်းညွန်ထားတဲ့ အတိုင်တိတိကျကျကိုလုပ်တာပါ။
လေးငါးခါရှိပြီး။ကြက်ခြေခတ်ပုံပဲပေါ်နေတာ။လူတိုင်ရပြီး ကျွန်တော်ကျ မှ မရဖြစ်နေတာ။
သေရှာမလုပ်ဘူးလို့မထင်ပါနဲ့။ပြောတဲ့ အတိုင် တိတိကျကျကိုလုပ်တာပါ။
ူုူlinks နှစ်ခုလုံးကို စမ်းကြည့်တာပါ။ဘာလိုတာလဲပြောပြပေးပါအုံး။
ကိုဝင်းထွန်းမှားနေတာကတော့... အပေၞကကျွန်တော် အနီနဲ့ပြထားတဲ့.. http:// ဆိုတာကြီး အပိုပါနေတာပါပဲ။ [img]...[/img] နှစ်ခုကြားက ကိုယ်ပေၞစေချင်တဲ့ပုံရဲ့ လိပ်စာကမှားနေမှတော့... IE မှာဆိုကြက်ခြေခတ်၊ Firefox မှာဆိုဗလာကြီးပဲ ပေါ်နေတော့မှာပေါ့ ကိုဝင်းထွန်းရယ်။ အပေါ်ကကိုဝင်းထွန်းရဲ့ပုံတွေရဲ့လင့်ခ်အစစ်အမှန်က.. http://img411.imageshack.us/img411/4324/12236az4.gif နဲ့ http://i32.tinypic.com/2wrhggj.png ဖြစ်ရပါမယ်။ အဲဒီတော့.. [img]...[/img] tag နှစ်ခုထဲကိုသွင်းလိုက်ရင်... [IMG]http://img411.imageshack.us/img411/4324/12236az4.gif[/IMG] နဲ့ [IMG]http://i32.tinypic.com/2wrhggj.png[/IMG] ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာပေါ့..။ ကဲ.. အခုလောက်ဆို အမှားကိုမြင်လောက်ပါပြီ။ အမှန်ပြင်စေဗျာ။ လောလောဆယ် အောက်မှာကျနော်ပြင်ထားတဲ့ ကိုဝင်းထွန်းရဲ့ပုံလေးတွေ...။
အောက်ပါအသင်းဝင် 27 ဦးတို့မှ ကိုပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ကွက်တိ, တက်တူး, နီထွန်းဦး, ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးဦးဗျားဗျား, ဇေယျာအေး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, နှင်း, aungphyo, blackNwhite, g00gle, kaung kin lu, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thamadi, thetzin, zin min aung, zo
25-02-2008, 09:14 AM
ပုံသွင်းတာ အဆင်ပြေသွားပါပြီး။အခုလို စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ ဖြေကြားပေးတဲ့ မြန်မာ မိသားစုဝင် အားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ winntun အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, နီထွန်းဦး, ပခက, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, ဦးဦးဗျားဗျား, မောင်သံသရာ, နှင်း, aungphyo, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
25-02-2008, 02:01 PM
တကယ်အဆင်ပြေပြီလားမသိ ကျနော်ကြည့်တာကတော့ လုပ်ထားတာ အဆင်ပြေတဲ့ပုံပါ ဒါပေမယ့် လင့်ကအလုပ်မလုပ်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဆင်မပြေဘူးဆို ပြန်ပြောပါ
Last edited by ဂျစ်တူး; 25-02-2008 at 02:01 PM..
ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, kyawmyowin, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
ပို့စ် 26 ခုအတွက် 142 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပုံတွေတင်တာ မရလို့ ကူညီပါအုံးဗျာ... ကျွန်တော်က ဖိုရမ်ေ၇းပြီးတော့ ပုံတွေကို upload လုပ်တာ ဘယ်လိုဖြစ်တယ် မသိဘူး အပေါ်က အတိုင်း လုပ်ကြည့်ပါတယ် ... ကိုယ်ဖာသာကိုယ်တော့ ပြန်မမြင်ရဘူးဗျ
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ သက်ပိုင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပခက, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နှင်း, kyawmyowin, mmshwemoelay, zo
Find More Posts by သက်ပိုင်
အရင်ဆုံး http://www.imageshack.us ကိုဝင် ပြီးရင် Browse ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်တင်ချင်တဲ့ပုံကိုရွေး
ပြီးရင် ပုံပေၞလာရင် Right Click နှိပ်ပြီး Properties နှိပ်လိုက်
ပြီးရင် Element Properties မှာ Location က Address ကို Copy လုပ်
ကိုယ်တင်မယ်ပို့စ်မှာ Insert Image ကို နှိပ်
ပြီးရင် http// ရဲ့ အနောက်မှာ Paste လုပ်ပြီး ok နှိပ်လိုက်
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
Last edited by phyothuhein; 02-02-2009 at 12:12 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 33 ဦးတို့မှ phyothuhein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, စမောလေး, နီထွန်းဦး, ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သက်ပိုင်, သင်းသင်းဟန်, သူသူလေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဦးဦးဗျားဗျား, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, amaung344, arkaraung, aungphyo, coolboy, kaung kin lu, koaungkyaw7, kyawmyowin, lokasara, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, moekyal, mr.kohtun, phoetharlay, phyomyintthein, smlat88, thamadi, Ye Naung, zo
imageshach.us ကိုဘယ်လိုရှာရသလဲဆိုတာ ပြောပြစေချင်ပါတယ် ။
အင်တာနက်မှာ ဒေါင်းလော့ လုပ်ရမှာလား
ကောင်းသောသူတို့အတွက် အဆိုးဆိုတာ အရှေ့မှာပဲ [COLOR="Blue"][/COLOR][COLOR="Red"][SIZE="5"]:4:[/SIZE][/COLOR]
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ စိုးလင်း(၁) အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သင်းသင်းဟန်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နှင်း, aungphyo, kyawmyowin, minthike, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
တည်နေရာ: Insein, Yangon
ပို့စ် 822 ခုအတွက် 3,470 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by စိုးလင်း(၁)
http://imageshack.us/ .... ဖြစ်ပါတယ်..
h နဲ့ k နဲ့မှားနေတာပါ ကိုစိုးလင်း..
Love truly, Laugh uncontrollably!
အောက်ပါအသင်းဝင် 19 ဦးတို့မှ chitnyimalay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စိုးလေး, နီထွန်းဦး, ပခက, မိုးတိန်, သင်းသင်းဟန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, နှင်း, Aung Aung, kaung kin lu, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, moekyal, smlat88, thetzin, zo
Find More Posts by chitnyimalay
ပို့စ် 79 ခုအတွက် 283 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကိုပိုင် အားလုံးရပါတယ် ပုံကြီးလို.မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ kolinlin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, နှင်း, kyawmyowin, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, zo
Find More Posts by kolinlin
Originally Posted by kolinlin
ကိုလင်းလင်းရေ.. အောက်ကလင့်ခ်လေးမှာ... ပုံကိုသွားပြင်လို့ရပါတယ်..
အေက်ကလင့်ခ်မှာလည်း.. ကိုsawjonnie ရှင်းပြထားတာရှိတယ်.
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ chitnyimalay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, ပခက, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နှင်း, aungphyo, kaung kin lu, ko lin, kolinlin, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
14-02-2009, 06:54 PM
ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ တကယ်ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ kolinlin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နှင်း, chitnyimalay, kyawmyowin, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
13-03-2009, 03:21 PM
အားလုံးကိုပြော ပြချင်တာကတော့ imageshackမှာပုံတင်ချင်ရင်တော့ အရင်ဆုံး registrအရင်လုပ်ရပါတော့မယ်။
ပြီးရင် ပတ်ဝက်ရယ် ယူဇာနိမ်းကို မေးလ်ပို.ပေးပါတယ်။
အဲဒီကနေ registrလုပ်ပြီးရင် ဟောဒီအဆင့် ကိုရောက်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ Upload Imageကိုတွေ.ရင် အဲဒီမှာ တင်ရပါမယ်။
ဖိုရမ်မှာပုံတင်ချင်ရင် Get code for Forumsမှာယူရပါမယ်။ အရင်ဆုံးပုံကို slectလုပ်ပေးရပါတယ်။
မှားနေတာ ရှိရင်လဲ ပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။Update လုပ်ပေးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ သောကမဲ့မိုးတိမ် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကွက်တိ, တီဘွား, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, ferd, kyawmyowin, maJunior, minthike, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
17-03-2009, 07:34 PM
Image shack မှာ ပုံတင်ဖို့ Register လုပ်စရာ မလိုပါဘူးခင်ဗျ။ ဒီတိုင်းတင်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဘဲ တင်နေကြ၊ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။
နောက် ပြောချင်တာ တခုက ဖိုရမ်မှာ ပုံတွေ Thumbnail mode နဲ့ တင်နေကြတာ တွေ့လို့။ Thumbnail mode နဲ့ တင်တာကို ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ page loading မြန်ပါတယ်။ နက်ကောင်းရင် မသိသာပေမဲ့ နက်နှေးတဲ့သူတွေအတွက် ပုံကို ဆိုဒ်ကြီးနဲ့ တင်ရင် လွယ်လွယ်နဲ့ မတက်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခုသတိထားရမှာက Thumbnail နဲ့ တင်တဲ့အခါ click လုပ်ရင် ပုံကြီးပေါ်အောင် တင်ပါ။ မဟုတ်ရင် ကိုယ်တင်တဲ့ ပုံ သူများလည်း သေချာကြည့်လို့မရရင် သိပ်တော့ မထူးပါဘူး။
အဲ့လို နှိပ်ရင် ပုံကြီးရတဲ့ Thumbnail လင့်ကို တင်ချင်ရင် သူပေးထားတဲ့ လင့်တခုလုံးကူးပါ။ [*img][/img] ၂ခုကြားထဲက လင့်ကိုဘဲ ကူးရင် ကိုယ်တင်တဲ့ thumbnail က နှိပ်လည်း မကြီးတဲ့ ပုံသေးလေးတွေ ဖြစ်ကုန်ပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်အစကတော့ ထပ်ရှင်းပြမလို့ဘဲ။ ကိုပိုင် ရှင်းပြထားတဲ့ ပို့စ် ၁ နဲ့ ၂ ကို သေချာဖတ်ရင် အကုန်ရှင်းပါတယ်။ အလွယ်ဆုံးနည်းပါဘဲ။ နားမလည်ရင် အဲ့ဒါကိုဘဲ သေချာဖတ်ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 28 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုသဝေထိုး, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နေမင်းမောင်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, သောကမဲ့မိုးတိမ်, အောင်မိုးထွန်း, ငြိမ်းချမ်း, နှင်း, ko lin, kyawmyowin, maJunior, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, myatnoethu, new-comer^girl, phoetharlay, smlat88, thetzin, tu tu, yelinoo, zo
20-03-2009, 02:58 PM
နယူးက ကိုအောင်အောင်တင်ထားသလို ဘောလုံးအသင်းအရုပ်လိုမျိုးလုပ်တာ မရတာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ new-comer^girl အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ယွန်းယွန်း, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, နှင်း, kyawmyowin, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
20-03-2009, 05:29 PM
newcomergirl signature မှာ ပုံတင်ထားတာ တွေ့ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးမှလား။
ကျွန်တော့်အထင် ပို့စ်တင်တဲ့အခါ ထိုးမြဲလက်မှတ်ကို ပြထားမယ် ဆိုတဲ့ box ကို အမှန်မခြစ်ထားလို့ ထင်ပါတယ်။
signature ပုံတင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အောက်ကလင့်မှာ ကိုရဲနောင်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ်။ ကြာပြီဆိုတော့ တချို့ပုံတွေ မရှိတော့ပေမဲ့ အဲ့မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်တော့ ရပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, arkaraung, ko lin, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, new-comer^girl, phoetharlay, smlat88, thetzin, zinnaing, zo
ပို့စ်3ခုအတွက် 18 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
မေးချင်တာတွေကို ဘယ်မှာမေးလို့ ရနိုင်မလဲဆိုတာ ပြောပေးပါဦး
နောက်ပြီးတော့ ပုံတွေလဲ ပို့ ချင်တယ်။....
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ အိမ်မှူးခင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသဝေထိုး, ယွန်းယွန်း, နှင်း, kyawmyowin, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
Find More Posts by အိမ်မှူးခင်
20-03-2009, 09:04 PM
အပေၞမှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်း ပုံတွေ တင်လို့ ရပါသလား.....
ရှေ့ကိုဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာ အခက်တွေ့ နေတယ်.ကူညီပြီးပြောပေးပါဦး...
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ အိမ်မှူးခင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, နှင်း, kyawmyowin, mmshwemoelay, moe san dar, smlat88, thetzin, zo
ဖိုရမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာတွေ ရှိရင် ဖိုရမ်မှ အခက်အခဲများ ဆိုတဲ့ ကဏ္ဍမှာ သွားမေးနိုင်ပါတယ်။ တခြားကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ အခက်အခဲ (or) တခြားမေးစရာတွေ ရှိရင်တော့ အခြားအခက်အခဲများ ကဏ္ဍမှာ မေးနိုင်ပါတယ်။
ပုံတင်ချင်ရင်တော့ ဒီတော့ပစ်ရဲ့ ပို့စ်နံပါတ် ၁ နဲ့ ၂ မှာ ကိုပိုင်ရှင်းပြထားတာကို သေချာဖတ်ကြည့်ပါ။ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ Aung Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုသဝေထိုး, ချယ်ရီမင်း, နီထွန်းဦး, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ခေါက်ရောင်းသား, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇေယျာအေး, နေမင်းမောင်, arkaraung, aungphyo, bonge, kyawmyowin, minthumon, mmshwemoelay, moe san dar, myatnoethu, new-comer^girl, smlat88, thetzin, yelinoo, zo
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ အသင်းဝင်များအနေဖြင့် image ပုံများကို တင်ပြီး သတင်းအချက်အလက်များ ကို မျှဝေကြရာတွင်.. ယခင်က imageshack.us ၊ tinypic.com၊ နှင့်တခြား image hosting တွေကို အသုံးပြုကြမှာပါ..။အသုံးပြုတဲ့ သူတွေက ဆက်သုံးပါ.. အဆင်ပြေကြရင်.. လွယ်ကူကြရင် ပြဿနာ မရှိပါဘူး..။ ခုနောက်ပိုင်း tinpic က အပ်လုပ်တခါတင်ရင်.. တစ်ခါကုတ်ဒ်တောင်းပါတယ်..။
အဆင်သိပ်မပြေလှပါဘူး..။ ပုံတွေ.. ၁၀ ပုံလောက်ကို တစ်ခါထဲ တင်ချင်ရင်.. တော်တော်ကို မလွယ်လှပါဘူး.. ။ ခု www.cyberwarez.info ကနေ.. sister project အနေနဲ့ distribute လုပ်ထားတဲ့ ..
ကတော့ တော်တော်ကို အဆင်ပြေလှပါတယ်...။ စမ်းပြီးသုံးကြည့်ကြပါ။
image ပုံများတင်တဲ့နေရာမှာ ပြဿနာ ကင်းကင်း ဖြစ်ကြပါစေ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 35 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, နီထွန်းဦး, မင်းအာကာကျော်, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, အောင်မိုးထွန်း, ဖြိုးယံလေး, နှင်း, amaung344, arkaraung, Aung Aung, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, ko lin, kyaukphyu, kyawmyowin, KznT, minthike, minthumon, moe san dar, pannuko, phoetharlay, smlat88, thetzin, zo
ပြန်စာ - ပုံလေးတွေထည့်ကြမယ်...
ကိုရဲအောင် အကြုံပြုထားတာလေး တွေ့လို့ ကျွန်တော်လည်း ဖိုရမ်မှာ စာရေးလို့ ပုံတွေတင်ဖြစ်တဲ့ အခါ ခုနောက်ပိုင်း အမြဲသုံးလေ့ ရှိတာတစ်ခုကို အခြားမိသားစုတွေလည်း သိရအောင် အကြံပြုချင်ပါတယ် - အရင်ကတော့ Image တွေ Upload တင်ဖို့ ဆိုဒ်တော်တော်များများ လည်ခဲ့ဖူးတယ် - သုံးပြီးခဏပဲ - အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူး - အဓိကက ကိုယ်တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို ဖျက်ခံရမှာ ကြောက်တာရယ် - ကိုယ်တင်လိုက်တဲ့ ပုံတွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် Control လုပ်လို့ မရတာရယ် - အဲ့နှစ်ချက်ကြောင့် ကျွန်တော် ဆိုဒ်တကာ ဟိုပြောင်းလိုက် ဒီပြောင်းလိုက် ပြောင်းတင်ဖြစ်ခဲ့တယ် - နောက်ပိုင်းကျတော့ အဲ့လိုလုပ်လို့ မဖြစ်ဘူး ဆိုတာ သိလာတယ် - ကျွန်တော်က စာရေးရင် များသောအားဖြင့် ပုံနဲ့ တွဲရေးလေ့ရှိတော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ စာထဲကပုံတွေ အဖျက်ခံရတဲ့ ထဲ ပါသွားရင် ဖိုရမ်မှာ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာကလည်း ဟာတာတာကြီး ဖြစ်ကျန်ခဲ့မှာစိုးလို့ ..... စိတ်ချရလောက်မယ့် နေရာလိုက်ရှာတယ် - အဖျက်ခံရမယ် မခံရဘူး ဆိုတာ ကျိန်းသေကြီး ပြောလို့ မရပေမယ့် နောက်ပိုင်းတော့ Imageshack.us ကို အားကိုးလိုက်တယ် - ခုထက်ထိတော့ Imageshack.us မှာ ကျွန်တော် တင်ထားသမျှ ပုံတွေ တစ်ခုမှ အဖျက်မခံရသေးဘူး - ဒါပေမယ့် စစချင်း ကောင်းကောင်းမသုံးတတ်တော့ ပုံတစ်ခုခု တင်ချင်ပြီ ဆိုရင် Imageshack.us ကိုသွားတယ် - သူပြထားတဲ့ နေရာကနေ Browse လုပ်ပြီး တင်တယ် - URL ထွက်လာရင် ကူးပြီး ဖိုရမ်မှာထည့်တယ် - အဲ့လို လုပ်ခဲ့တယ် -
နောက်ပိုင်းကျတော့ ပုံတစ်ပုံစ နှစ်ပုံစမကတဲ့ ပို့စ်တွေ ရေးလည်းရေးရော - ခဏခဏ အဲလို Homepage သွားပြီး Upload တင်နေရတာ စိတ်တိုင်းမကျတော့ဘူး - ကသီလင်တနိုင်လာတယ် - အဲတာနဲ့ နောက်တစ်မျိုးပြောင်းပြီး ImageShack Toolbar ပြောင်းသုံးခဲ့တယ် - Browser ကနေ တိုက်ရိုက် Upload တင်တဲ့နည်းနဲ့ပေါ့ - ဒါပေမယ့် ImageShack Toolbar က ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ - သူ့ကို သုံးချင်ရင် IE နဲ့ Firefox မှာပဲ သုံးလို့ရတယ် - ကျွန်တော် သုံးတာက Chrome - အဲ့တော့ အဆင်မပြေချင်တော့ဘူး - ဒါတင်မကသေးဘူး - ကျွန်တော့်မှာ Image upload တင်ချင်ရင် အထိုင်အထနှေးတဲ့ Firefox ကိုဖွင့်ရတဲ့ အပြင် Toolbar ကိုပါ loading လုပ်နေတာ စောင့်နေရတော့ ပိုအဆင်မပြေချင်တော့ဘူး - Browser တွေက Toolbar များရင် လေးတယ်လေ - အဲတာနဲ့ နောက်တစ်မျိုး ထပ်ကြံတယ် - အဲ့မှာ ခုသုံးနေတဲ့ Imageshack Uploader ဆိုတာ သွားတွေ့တယ် - Free ပေးထားတဲ့ အပြင် - Windows, Mac, Linux, Iphone အားလုံးမှာ သုံးလို့ ရတယ် - တစ်ပုံတည်းမကလို့ ၄ - ၅ - ၁၀ ပုံတင်ချင်လည်း အောက်မှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Add ကနေ ခေါ်ပြီး Upload ဆိုတဲ့ Click တစ်ချက် ပေးလိုက်ယုံပဲ -
နောက်ပြီး ကိုယ့် ပုံတွေကို တင်ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်း Public ပေးမလား - Private လုပ်မလား - ပြန်ပြင်ချင်သလား စိတ်ကြိုက် Control လုပ်လို့ ရအောင် Account ကိုပါ တစ်ခါတည်း login ဝင်ထားလို့ ရတာမို့လို့ ကိုယ်တင်လိုက်သမျှ ကိုယ့် ပုံတွေအားလုံးက သက်ဆိုင်ရာ ကိုယ့် account ထဲကို Auto ဝင်ပြီးသား -
Uploading process ပြီးသွားရင်လည်း တင်ထားတဲ့ ပုံအလိုက် Direct links တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ခုလို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ၄ - ၅ - ၁၀ ပုံတင်ထားရင် သက်ဆိုင်ရာ ပုံအသီးသီးရဲ့ Direct links တွေကို Arrow button ကနေ တစ်ပုံချင်း ကူးပြီး ယူလို့ ရပါတယ်။
လတ်တလောမှာတော့ ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ အနေအထားနဲ့ တွက်ကြည့်ရင် Imageshack Uploader က အဆင်အပြေဆုံးလိုဖြစ်နေတယ် - တစ်ခြား Image hosting တွေ အဆင်မပြေဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေးကို စမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
Last edited by KznT; 14-03-2011 at 01:53 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 38 ဦးတို့မှ KznT အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ချယ်ရီမင်း, ဆန်းမောင်, ညိုမင်းလူ, နီထွန်းဦး, မင်းအာကာကျော်, ယွန်းယွန်း, ဝင်းအောင်, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, amaung344, arkaraung, aungphyo, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, ko lin, ko myo, kyaukphyu, kyawmyowin, minthike, minthumon, moe san dar, smlat88, thetzin, thurein, tu tu, Ye Aung, yelinoo, zin min aung, zo
ပုံလေး တွေ ထည့်တဲ့အခါမှာ ခဏခဏ ပြသနာ တက်နေတာလေးကိုတွေ့တော့ ကျွန်တော် စာရေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ချိန်တုန်းက ပုံတွေကို Imageshack ကနေပဲ့ တိုက်ရိုက်တင်ပီး အသုံးပြုနေတာမို့ . ကျွန်တော် သိပ်ပီး မပြောပြနိင်ခဲ့ဘူး။ ခုတော့ ကျွန်တော် စိတ်ကြိုက်လေး တခုတွေ့တာမို့ ကျွန်တော် စာရေးဖြစ်တာပါ။ တကယ်တော့ သင်္ကြန် အမှတ်တရ ဆိုရင်လည်း ဟုတ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ပုံထည့်ဖို့ Image uploading ဆိုဒ်တွေကို ပဲ့ သုံးနေကြတာပါ ကျွန်တော်တို့ ပုံတွေကို ဘယ်ချိန် ဖြတ်ချမလည်း ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပေါ့။ သူဖျက်ချလိုက်ရင်လည်း ခံလိုက်ရတာပဲ့ ကျွန်တော် ဆို Srt နဲ့ Movies ပေါင်းစည်းခြင်းက လင့်နေရာမှာဆို ကျွန်တော့ ပုံတွေ မရှိတော့ဘူး ဖျက်ချလိုက်ပီ။ ကျွန်တော် ပြန်ပြင်ပေးဖို့ကိုလည်း မလွယ်ဘူး။ ပြန်စဉ်းစားနေရတယ်။ Image Shack ကျတော့လည်း ဥရောပ က လွဲလို့ ကျန်တဲ့နိင်ငံတွေကို ရေခဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ဖားပြုတ် ပုံပဲ့ ပြထားတော့ တကယ်ကို ဆိုးတယ်။ Tinypic ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကျတော့လည်း တပုံချင်းဆီတင်လိုက် သူပေးတဲ့ စာကိုရိုက်ရလိုက်နဲ့ အလုပ်ကို ရူပ်နေတာပဲ့ . နောက် Bigpic ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်ကျတော့လည်း Hosting ဆိုဒ်က ဘယ်ချိန် ဖျက်ချမလည်း နဲ့ ရင်တထိတ်ထိတ် နဲ့ ရင်မနေရတယ်။ခုတော့ အဲ့ ရင်မမ နေရတာတွေကို ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ ကျော်လွှားကြည့်ကြရအောင်.. တကယ် တန်းတော့ အစ ကတည်းက ရှိပီး.သာ..ကျွန်တော်တို့ ခဏမေ့ထားခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တော့ Google ကနေ ထုတ်ပေးထားတဲ့ Picasa ဆိုတာ ရှိပီးသားပါ ကျွန်တော်တို့ တွေ အနေနဲ့ မသုံးပဲ့ Image Hosting တွေ ကို သွားနေကြတာမလို့ပါ။ ခု တကယ်ကို အဆင်ပြေပါတယ် 1 gb တောင် Free ပေးထားတာပဲ့ အကောင့် ၂ ခုရှိရင် . ၂ ဂစ်ပေါ့ ။ Picasa ကနေ တင်ဖို့ကို အကြံပြုလို့ပါတယ်။
ပုံ ကြိုက်သလောက်တင်ချင်သလောက်ကိုလည်း တခါတည်း Select လုပ်ပီး တင်လိုက်လို့ ရသလို ကျွန်တော်တို့ လင့် ယူဖို့လည်း မခက်ခဲ့ပါဘူး။ Google>> More>> Photo >> အကောင့်နဲ့ ၀င်လိုက်ရင် ရပါပီ ။
တင်ချင်တဲ့ ပုံကို Upload က နေ ရွေးပေးလိုက်ပီး တင်ရုံပါပဲ့ ။ ဒီနေရာမှာပြောစရာ ရှိတာကို Sharing နေရာမှာ ကျွန်တော်တို့ Public on the web ဆိုတာလေးကို သွား ပြင်ပေးလိုက်ရင် ရပါပီ ပုံလေးတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ရှင်းသွားမယ်ထင်တယ်။ ဒီ
ဒီအပေါ်က ပုံလေး မှာ Anyone with the link ဖြစ်နေတာကိုတွေ့မှာပါ အဲ့နောက်က Edit ကနေ ပြင်ပေးလို့ ရသလို့ Album လိုက်ကို အောက်က ပုံလို နေရာကနေ သွားရွေးပေးပီး Public on the Web ကို သွားချိန်းပေးလိုက်ရင် ရပါပီ ။
နောက်ဆုံး စိတ်ကြိုက်တင်ပီးပီ ပုံတွေ ကို ပြန်မျှပေးတော့မယ် ဆိုရင်လည်း မခက်ပါဘူး တင်ချင်တဲ့ ပုံကို Right Click ထောက်ပီး Copy image URl ကို ယူလာပီး တင်လိုက်ယုံပဲ့ ။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ပုံလင့်တွေ ပျက်သွားတာမဖြစ်စေချင်ပါဘူး ။ ကိုယ်ရေးထားသမျှ စာလေးတွေ ပုံလေးတွေ ပျက်သွားမှာ လူတိုင်း နှမြောကြတာပဲ့လေ ။ အဲ့တော့ ဒီ Google ကြီးရှိနေသမျှတော့ ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေ မပျက်နိင်တော့လောက်ပါဘူး။
အောက်ပါအသင်းဝင် 28 ဦးတို့မှ သန့်ဇင်ဌေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ဆွိ, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, နေမင်းမောင်, မောင်ကရင်ကြီး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, arkaraung, aungphyo, AZM, bagothar85, bonge, g00gle, kyawmyowin, KznT, lu soe, minthike, minthumon, pannuko, PyaitSone, smlat88, thetzin, yelinoo, zin min aung, zo
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ။ ရေတော. မလောင်းပါနဲ.။ ဖျားချင်နေလို.ပါ။ ပုံလေးတွေ တင်တာနဲ. ပတ်သတ်ပြီး ကိုသန်.ဇင်ဌေးက Picasa ကို အကြံပြုလာတာ တွေ.ရပါတယ်။ ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော. Picasa ကို အသုံးပြုတာ ဒီ Post တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပါပဲ။ အဲဒီအချိန်က ကို KznT က imgur ကို အသုံးပြုဖို. အကြံပြုခဲ.တယ်။ ဒါပေမဲ. FAQ မှာ သွားဖတ်တော. ၆ လမှာ ကြည်.တဲ.သူ တခါ ရှိရင် ပုံတွေကို မဖျက်ပါဘူးတဲ.။ ဒါပေမဲ. Forum ထဲ Image တွေကို Embed လုပ်ရင် File အရွယ်အစားကို အသေးပြောင်းပြီး Embed လုပ်တာတွေ ရှိလာတယ်။ ဒီပုံမျိုးကို ဘယ်သူမှ Image URL ကို Copy လုပ်ပြီး၊ သီးသန်. မကြည်.ကြတော.၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် File တွေကို ၆ လ တခါ လိုက်ကြည်.ပေးရမလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါနဲ. Picasa ကိုပဲ ပြောင်းခဲ.တာပါ။ ပြောင်းသုံးတော. File တွေကို အရွယ်အမျိုးမျိုးနဲ. Embed လုပ်လို.ရတာကို သွားတွေ.ပါတယ်။ အားလုံးလဲ သိသွားအောင် သိသလောက်လေး မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ပုံကို Upload တင်လိုက်ပါ။ တင်ပြီးသွားတဲ.ပုံကို ၀င်ကြည်.ရင် ညာဘက်ခြမ်းမှာ Link to this photo ဆိုတဲ. စာသားလေးတွေ.ပါလိမ်.မယ်။ ၁) Link to this photo ကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ ၂) ပြီးရင် ပုံထဲမှာ ပြထားတဲ. အတိုင်း Image only (no link) ဆိုတဲ.စာဘေးက Checkbox လေးကို အမှန်ဖြစ်အောင် နှိပ်ပါ။ ၃) Select Size ဆိုပြီးရေးထားတဲ. ဘေးက မျှားလေးကို နှိပ်ပြီး Size ရွေးပေးပါ။ ၄) Embed image ဆိုတဲ. နေရာက Link ကို Copy လုပ်ပြီး ခါတိုင်း Forum မှာ ပုံတွေတင်သလိုပဲ တင်လို.ရပါပြီ။
ဒါဆို Size အမျိုးမျိုးကို Embed လုပ်လို. ရသွားပါပြီ။ ကျွန်တော် အသုံးများတာကတော. Original Size နဲ. Medium ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံသေးသေးဆိုရင် Original Size က 300 px လောက်ပဲ ရှိတတ်ပြီး၊ အဲဒီ Size က Forum မှာ တင်ဖို. အကောင်းဆုံးလို. ထင်ပါတယ်။ ပုံကြီးကြီးတွေဆိုရင်တော. Original Size က 600 px နှင်. အထက်ရှိတတ်ပါတယ်။ Medium Size ကတော. 400 px လောက်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို. စာမမြင်ရလဲ အရေးမကြီးဘူး။ ပုံကို ကြည်.ရုံနဲ. မှန်းကြည်.လို. ရတယ်ဆိုရင်တော. Medium Size ကို သဘောကျပါတယ်။ တကယ်လို. စာမမြင်ရရင် ဘာမှန်း မသိတဲ. သရုပ်ပြပုံမျိုးဆိုရင်တော. Original Size သို.မဟုတ် 600 px လောက်ကို ရွေးပြီး Forum က အလိုလို Size ချုံ.သွားတာကို ရွေးချယ်သင်.တယ်ထင်ပါတယ်။ အဆင်ပြေကျပါစေ။ အားလုံး နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကျွန်တော် ယှဉ်ကြည်.လို.ရအောင် Size နမူနာ ၂ ခုတင်ပေးထားပါတယ်။ File က တခုထဲပါ။
600 px size - https://lh4.googleusercontent.com/-M...plk/s640/4.jpg
400 px size - https://lh4.googleusercontent.com/-M...plk/s400/4.jpg
Last edited by g00gle; 12-09-2011 at 03:10 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 29 ဦးတို့မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သမီး, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, နီထွန်းဦး, မိုးတိန်, ယွန်းယွန်း, သန့်ဇင်ဌေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မေဦးမွန်, မောင်ကရင်ကြီး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်မိုးထွန်း, နှင်း, arkaraung, aungphyo, bagothar85, bonge, kaung kin lu, kyawmyowin, KznT, minthike, minthumon, PyaitSone, smlat88, thetzin, tu tu, yelinoo, zin min aung, zo
ကျွန်တော်ပုံလေးတွေတင်ချင်ရင် imageshack ကိုသုံးပါတယ်ဗျာ...အရင်က firefox 3.6 သုံးတုန်းက imageshack toolbar ကို addon လုပ်ထားတာအဆင်ပြေပါတယ်...အခု firefox 4.0.1 ကိုလည်းပြောင်းသုံးကော toolbar က ထည့်လို့မရဘူး...Compatible မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောနေပါတယ်...အဲဒါ အဆင်ပြေမယ့်ဟာလေးဘယ်မှာရနိုင်မလဲခင်ဗျာ...
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ minthumon အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, နှင်း, g00gle, kyawmyowin, minthike, smlat88, thetzin, yelinoo, zo
ဆိုတာလေးသုံးနိုင်ပါတယ်၊ ImageShack ကအခု storage ပမာဏ ကန့်သက်ချက်ရှိနေလို့ လောလောဆယ် imgur နဲ့ဘဲ ပုံတွေတင်ဖြစ်တယ် imgur လဲဘယ်တော့ ကန့်သတ်မယ်မသိဘူး
Last edited by minthike; 03-08-2012 at 08:14 AM..
စနိုးလေး, ယွန်းယွန်း, မောင်ပေါ်ဦး, azp09, essential, Hlwamkoko, kaung kin lu, tu tu
အခုနောက်ပိုင်း switch editor mode ရှိလာပြီ ဆိုတော့ ကိုပိုင် ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အပေါ်က အဆင့်ကို ကျော်ချင်ရင်လဲ ကျော်လို့ရပါတယ်၊
forum မှာပုံတွေတင်ရတာ ကွန်ပြူတာမှာ copy paste သလိုပါဘဲ၊ image hosting မှာ အခုအဆင်ပြေတဲ့ image hosting site တစ်ခုဖြစ်တဲ့ http://imgur.com/ နဲ့ ဘယ်လို လုပ်မလဲဆိုတာလေးပါ၊
အပေါ်က ဝိုင်းထားတဲ့ switch editor button ကို တစ်ချက်နှိပ်ပေးရင် mode နှစ်မျိုး ပြောင်းပါတယ်
တစ်မျိုးက မိမိစာရေးသားနေစဉ်မှာ တကယ်လို့ ပုံတွေ စာလုံးအရောင်တွေ စတာတွေပါရင် ကြိုတင်မြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းမျိုးပါ၊
နောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ပေးရင်တော့ ပုံတွေမပါဝင်တဲ့ ရိုးရိုး မြင်ကွင်းမျိုးပါ၊
http://imgur.com/ မှာ ပုံတင်ဖို့ရာ account တစ်ခုဖောက်ပါ/register လုပ်ပါ၊
imgur မှာ acoount လုပ်ပြီးပြီဆိုပါဆို့/ browser မှာ sign in ဝင်ထားပါ
desktop မှာရှိတဲ့ အောက်က ပုံလေးကို upload လုပ်ပါမယ်
computer ကဆိုတော့ Computer ဆိုတဲ့ buttom ကို click ပေးပါ
ပြီး တင်ချင်တဲ့ ပုံကိုရွေးပေးပြီး start upload button ကို click ပေးပါ၊ (image shack နဲ့သဘောတရားချင်းအတူတူပါဘဲ)
တင်ချင်တဲ့ ပုံကို အောက်ကပုံအတိုင်း drag and drop လုပ်ပေးရင်လဲရပါတယ်
(drag and drop ဆိုတာက ကိုယ်လိုချင်တဲ့ file ကို left click နဲ့ ဖိထားပြီး အဲဒီ file ကိုလိုရာကို ဆွဲသွား ပြီး လွှတ်ပေးတာမျိုးပါ..
upload ပြီးရင် ပေါ်လာမည့် ပုံမှာ right click >> copy image ပေးပါ
ပြီးရင်ရေးလက်စပို့စ်ဆီကိုပြန်လာပါ။ ပုံထည့်ချင်တဲ့နေရာမှာ cursor ချပြီး right click > Paste ဆိုရင်ရပါပြီ..
ps; ပုံထဲပါတဲ့ ခွေးပုံလေးတော့ မတင်တော့ပါဘူး
Last edited by minthike; 03-08-2012 at 09:31 AM..
ကောင်းထက်ဝေ, g00gle, htun30, kaung kin lu, tu tu, yelinoo